Induction Isku xirxirida Wareegga Dharka si aad uga saarto dharka
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / Ka-saarista Kuleylka Kuleylka Induction
Category: Kuleylka kuleylka Tags: kuleylinta xargaha xargaha, xarigga kuleylka ee kuleylka, RF kuleylinta xarigga, RF kuleylinta mashiinka xarigga xarigga, xarig xarig, weelka tuubada kululeeyaha, kululaynta tuubbooyinka kululaynta
Induction Isku xirxirida Wareegidda Si aad u gubto lakabka dhejiska leh Isticmaalka kuleyliyaha RF
Fiilada kuleylka ah ee loo yaqaan 'heat Heat' si aad u gubto lakabaadda dharka
Waxyaabaha xirmooyinka silig naxaas ah oo silig ah oo xariijimo leydi ah oo ka kooban .025 inji laba jibbaaran (.0635 sentimitir laba jibbaaran)
Heerkulka 1300 ° F (704 ° C) ee wareegyada 5
Joogitaanka 204 kHz
Qalabka DW-UHF-10kW nidaamka kuleylka kuleylka ee lagu qalabeeyo saldhigga kuleylka fog, oo ay ku jiraan (1) 1.00 μf capacitor. Qalab kuleyliyaha kuleyliyaha oo loo qaabeeyey loona sameeyay si gaar ah
Geedi socodka Sideed wareeg ah oo xarig ah ayaa loo adeegsadaa in lagu soo saaro qaabka kuleylka la doonayo. Gariiradda waxay leedahay aqoonsi 0.62 ah. Fiilo shaqsi ah ayaa la geliyaa oo la kululeeyaa si ay u gubto faashadda 5 ilbidhiqsi. Meelaha waaweyn ee iskutallaabta ayaa u baahan waqti kuleyl dheer ama awood sare.
Wareegga kuleylka kadib, silig kasta waxaa laga saaraa gariiradda oo waxaa loo oggol yahay inuu ku qaboojiyo heer dabiici ah.
Natiijooyinka / Faa'iidooyinka Isbarbardhigida Makhaasiin Mihnadeed, kuleylka induction waa:
• Si aad ah loogu celin karo natiijooyinka joogtada ah